Wararka Maanta: Axad, May 27, 2012-Ciidammo Ka tirsan Xarakada Al-shabaab oo gaaray Degmada Kismaayo
Ciidamadan oo ku hubeysan hubka fudfudud iyo gaadiidka nooca dagaalka ee Tiknikada loo yaqaan ayaa ilaa shalay kusoo qulqulaya magaalada Kismaayo, iyadoona sidoo kale ciidamadani ay wehliyaan masuuliyiin iyo saraakiil sar sare oo katirsan xoogagga Al-shabaab.
Cutubyo katirsan ciidamada soo gaaray Kismaayo ayaa u gudbay dhanka furumaha dagaalka e deegaanka xayo iyo weliba dhanka Degmada Badhaadhe ee gobolka Jubada Hoose.
Warar hoose oo ay HOL ka heleyso Jubooyinka ayaa sheegaya in Dagaalyahannada Al-shabaab ay doonayaan in ay xoogga saaraan sidii ay u difaaci lahaayeen magaalada Kismaayo, islamarkaasina uga hortagi lahaayeen duulaanka ciidamada dowladda, Raakaambooni iyo kuwa Kenya ay kusoo yihiin degmadaasi.
Ma ahan oo keliya gobolka Jubada Hoose goobaha ay ciidamadaasi gaareen, haseyeeshee ciidamadani ka yimid dhanka shabeelaha Hoose ayaa sidoo kale gaaray degmada Baardheere ee gobolka Gedo si ay u xoojiyaan howlgallada ka socda gobolkaasi.
Ciidamadani cusub ee soo gaaray gobollada Jubooyinka iyo Gedo ayaa kusoo beegmaya xilli ciidamada dowladda KMG oo kaashanaya kuwa AMISOM ay xoogagga Al-shabaab kala wareegeen inta u dhexeysa Muqdisho iyo Afgooye kadib dagaallo ba’an oo labada dhinac ku dhexmaray halkaasi.